Ogaden News Agency (ONA) – Madaxwaynihii Hore ee Gambia oo Dalka Iskaga Baxay Kadib Heshiis Lagaadhay.
Madaxwaynihii Hore ee Gambia oo Dalka Iskaga Baxay Kadib Heshiis Lagaadhay.
Madaxweynihii hore ee Gambia, Yaxya jammeh ayaa gaadhay dalka Equatorial Guinea ka dib markii uu isaga baxay dalkaas, si shaqada uu ula wareego madaxweynaha cusub ee ladoortay oo lagu magacaabo Adama Barrow.
Yaxya jammeh oo dalka ka baxay ka dib heshiis iyo cadaadis ay saareen dalalka galbeedka Afrika ayaa shalay gaadhay dalkii uu ku socday. Wuxuu Equatorial Guinea ku ahaan doonaa dibad jooge aan dalkiisa dib ugu noqon karin. Wuxuu dalka ka baxay ka dib heshiis ahaa in madaxweynaha cusub Adama Barrow uu xilka la wareego.
Mr. Barrow ayaa ku guuleystay doorashadii bishii December 2016 ka dhacdaay dalka Gambia. Waxaa ku qalqaaliyay Jammeh inuu dalka ka baxo urur goboleedka ECOWAS. Xaaladda magaalada Banjul ayaa hadda caadi ku soo noqtay, waxaana dib u furmay ganacsiga. Dalalka Galbeedka Africa ayaa diyaariyay ciidamo xoog uga qaada xilka Jammeh haddii uu isku sii dhajin lahaa xilka.
Mr. Jammeh ayaa markii hore ogolaaday in doorashada looga adkaaday, balse dib ayuu ka diiday, wuxuuna isku deyay inuu maxkamad geeyo si dib loogu noqdo codeynta. ECOWAS waxay hadda sheegeysaa in ciidamada halkaaas la geeyay ay sii joogi doonaan xuduuda illaa amniga ay ka xaqiijinayaan. Mr Barrow waxaa la filayaa inuu dalka dib ugu noqdo, haddana wuxuu weli ku sugan yahay dalka Senegal.
Ciidammada wadammada Galbeedka Afrika ayaa hakiyay qorshohoodii milateri ee ay doonayeen inay ku farageliyaan dalkaasi. Ciidamadaasi ayaa Khamiistii ka talaabay xuduudda Gambia, saacado yar uun kaddib markii la dhaariyey madaxweynaha cusub ee Gambia Adama Barrow, Waxaana Adama Barrow lagu dhaariyey gudaha safaaradda Gambia ay ku leedahay dalka Senegal.
In sidaas uu ku tago Jammeh waxaa diidan ururada u dooda xuquuqda aadanaha oo ku eedeynaaya inuu tacadiyo geystay. Waxay doonayaan in cadaaladda la horgeeyo, si loogu oogo dembiyada loo haysto. Waxay ku eedeynayaan inuu, xadhig, jidhdil iyo dil lagula kacay siyaasiyiintii mucaaraday maamulkiisii 22-sano jiray ee awooda uu u istimaali jiray.